အိုင်ကွန်အိုင်ကွန်များကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအော်ပရေတာများသည် high-end နှင့် low-end နှစ်ခုစလုံးအားသုံးစွဲသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက် high-end နှင့် low-end နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့သည့်အခါသုံးစွဲသူများသည်အော်ပရေတာ၏မူလ application များ၏ပြtheနာနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကတည်းက သူတို့ကအသိပညာတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ စပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ပဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးမပြုခဲ့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသောကြောင့်စွန့်ပစ်ထားသောဖိုလ်ဒါတွင်အမြဲတမ်းရှိနေသောအိုင်ဖုန်းတွင် bloatware ပြtheနာကိုတတိယပါတီများမှကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ပါ။ , အသုံးမကျနှင့်ငါတို့သည်သူတို့ခေါ်ချင်သမျှ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထို folder မှမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့နိုင်သော application များကဲ့သို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒါကခင်ဗျားတို့ကိစ္စသာဆိုရင်မင်းတို့မင်းကိုပြမယ် ဖျက်လိုက်တဲ့ icon နဲ့ system app တွေကိုဘယ်လိုဆယ်တင်ရမလဲ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာက iPhone application တွေရဲ့ icon တွေကိုငါတို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့မူလပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချည်နှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။
2 iOS တွင်ဖျက်ထားသောအက်ပ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်
3 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကို jailbreak ရှိပါက
သင်၏ terminal ပေါ်ရှိ iOS version ပေါ် မူတည်၍ menu options သည်ဤပုံတွင်ပြထားသည်နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် system icon အချို့၏ပုံကိုပြသခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ jailbreak ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော application ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သူသည်ငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအခါ ပြောင်းလဲမှုများပြန်ပြောင်းရန် option ကို။
မဟုတ်ပါက iOS မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောရွေးချယ်စရာအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည့် application အားလုံး၏ icon ကိုစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ရန် လျှောက်လွှာ icon ကိုပြန်လည်ရယူပါ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ကိုနှိပ်ပါ setting များကို.
အတွင်း setting များကိုကိုနှိပ်ပါ ယေဘုယျ.
ထိုအခါငါတို့နှိပ် ယေဘုယျ ငါတို့သွားတယ် ပြန်လည်စတင်.
ဒီ menu မှကမ်းလှမ်းသောကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများအနက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ပါ မူလမြင်ကွင်းကိုပြန်စပါ.
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန် ပြီးသွားရင် Reboot ကျသွားလိမ့်မယ် အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်။ Device Reboot ပြီးသွားရင်အရင်ကကွက်လပ်မပေါ်လာတဲ့ (သို့) တိုက်ရိုက်ဖော်ပြခြင်းမပြုတဲ့ icon တွေကိုသာမန် icon နဲ့အတူပြန်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီမီနူးထဲမှာ iPhone ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရွေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်၊ သူတို့တည်ရှိနေတာကိုမသိတာမကောင်းဘူး။
iOS 12 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါအက်ပဲလ်ကထိုအရာအသစ်ကိုထည့်သွင်းလိုက်သည် ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲရန်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောမူလအပလီကေးရှင်းများအားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုထားသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့်အတူအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုလို။ ဖြစ်စေ။
ပုံမှန်နှင့်အသုံးအများဆုံးအရာမှာစနစ်၏အသုံးမကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သော်လည်းသင်၏စက်ပစ္စည်းနေရာလွတ်အမြဲနိမ့်ကျပါကသင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာမှ၎င်းကိုပယ်ဖျက်ပါ, အက်ပဲလ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောဤလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလ application တစ်ခုကိုဖျက်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် လုံးဝစက်ပစ္စည်းကနေဖျက်မရ၎င်းအစား၎င်းသည်အသုံးပြုသူမြင်ကွင်းမှဝှက်ထားသောကြောင့်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုမှန်ကန်ပြီးလိုအပ်သောအရာသို့လျှော့ချသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဇာတိဖြစ်သော iOS application များအားလုံးသည်စနစ်၏မတူညီသောဒြပ်ထုများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် application တစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖျက်ခဲ့သောမူလအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သာလိုအပ်သည် Apple application store သို့သွားပြီးလျှောက်လွှာနာမည်ကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့ကျကျဥပမာတစ်ခုဖြင့် calculator application ကိုဖျက်ပစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုဖျက်လိုက်သည်နှင့် App Store ကိုဖွင့်ပြီးသွားသည် ရှာဖွေရေးအကွက်။
ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူလိုသည့် application ၏အမည်ကိုရေးသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့သိရမယ်၊ လျှောက်လွှာ၏တိကျသောအမည် ကျွန်တော်တို့ပြန်လည် install ချင်တယ်။
ရှာဖွေမှုသတ်မှတ်ချက်အရအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမရလဒ်၊ ဤကိစ္စတွင် calculator nငါတို့ဖျက်လိုက်တဲ့မူလ application ကိုပြလိမ့်မယ်။
အဲဒါဘယ်လိုသေချာသလဲ။ အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်အစားညွှန်ပြ၏ ရယူ, မိုa်းတိမ်၏အိုင်ကွန်ကိုအောက်တွင်ပြသသည်, ဤသည်သို့မဟုတ်ဤစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများမှလျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ download လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါမြှားပါသော cloud ပုံလေးကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အသုံးပြုပုံ ငါတို့မသေချာဘူးဆိုရင်application application ကိုနှိပ်ပြီး application developer သည် Apple ကိုယ်တိုင်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ။ လျှောက်လွှာဖန်တီးသူအမည်ကိုအက်ပလီကေးရှင်း၏အမည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤကိစ္စတွင် Apple ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကို jailbreak ရှိပါက
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်း jailbreak ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိနေပေမယ့် Apple ကရရှိနိုင်သော features အများစုကိုကူးယူထားသည် iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်မရရှိနိုင်သေးသောအနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်တွင်အသွင်အပြင်အနည်းငယ်သာရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခံစားနိုင်ရန်၎င်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေသည်။
သုံးစွဲသူများစွာအသုံးပြုသောအပြောင်းအလဲများအနက်တစ်ခုနှင့် jailbreak ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်စနစ်အပလီကေးရှင်းများ၏အိုင်ကွန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သောအခြားသူများကိုပြုပြင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအသုံးပြုသူအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပြီးအိုင်ကွန်တစ်ခုပျောက်ကွယ်သွားလျှင်၊ အဖြူရောင်ဖြင့်ပြခံရသည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည် အိုင်ကွန်အိုင်ကွန်များကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။
Jailbreak သည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် စနစ်၏အမြစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုပါတယ်ထို့ကြောင့်၊ ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအမျိုးအစားများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအားချွတ်ယွင်းမှုကိုပြသစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် tweak တစ်ခုကိုတပ်ဆင်သောအခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤချွတ်ယွင်းမှုသည် ပို၍ ထင်ရှားသည် iOS နှင့် Cydia ဗားရှင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ ငါတို့ install လုပ်ထားသောကြောင့်ဤအမျိုးအစား၏မည်သည့် application ကိုမဆို install လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ device ၏ jailbreak ပျက်စီးနိုင်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာကရိုးရိုးလေးဖြစ်ပေမယ့် iPhone option တချို့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိဖို့မကူညီဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » အိုင်ကွန်အိုင်ကွန်များကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။
ဟိုဆေး Cantellops ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုမှ 3G iPhone 8G အတွက် screen saver themes များကိုမည်သို့ download ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူနိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ပြုလုပ်ရန်ဗဟုသုတရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းသို့လွှဲပြောင်း။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သို့ပို့ပါ air_jose@yahoo.com ကျွန်ုပ်၏ iphone ကို ping လုပ်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အမြန်ဆုံး
Jose Cantellops သို့ပြန်သွားပါ
Bartolome Queteba ဟုသူကပြောသည်
ဒါက calculator, compass နဲ့ voice record icon တွေဆုံးရှုံးသွားပြီး home screen ကိုပြန်မရနိုင်ဘူး။ သူတို့ကိုတွေ့ဖို့ငါအောက်ကခလုတ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ လျှောက်လွှာတွေအားလုံးပေါ်လာတယ်။ ပြီးတော့ငါလိုအပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီကနေရွေးလိုက်တယ်။ အထက်ပါလှည့်ကွက်နှင့်အတူဘာမျှမပွနျလညျထူထောငျအကျင့်ကိုကျင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Bartolome Queteba အားပြန်ပြောပါ
Juan de Lomas က de Zamora ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နာရီအိုင်ကွန်ကိုမရရှိပါကကျွန်ုပ်သည်နှိုးစက်နာရီအဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပါသည်။ Iphon4(S မတိုင်မီ) ရှိပါကတစ်စုံတစ် ဦး က“ လမ်းကြောင်း” ကိုပြောပါ။
Juan de Lomas de zamora ကိုပြန်သွားပါ
settings icon ကိုမတွေ့ပါ။ ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ iphone ကို update လုပ်ပြီးအလင်းအိုင်ကွန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ (flash ကို lamp တစ်ခုသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်) ... ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
LXXURY ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ iOS 7.0.4 တွင် ilockges အတွက် gridlock ကို install လုပ်ရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ တစ်ချိန်ကငါစဉ်းစားမိသည်နှင့်ပင်ဤရိုးရှင်းသောပေမယ့်အသုံးဝင်သောခြေလှမ်းများနှင့်အတူကဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။
ဂရိတ်အဆိုပါ post ကိုငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်
လူကြီးလူကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ IPhone4ကိုသော့ဖွင့်လိုက်ပြီ၊ ဖုန်းပေါ်တွင်Telefónicaချစ်ပ်ကိုတင်လိုက်ပြီးမူလမြင်ကွင်းမှ contacts icon ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ သူတို့ကကျွန်ုပ်သည် home screen ကိုပြန်လည်စတင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘာမျှဖြစ်မလာပါကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုပေးနိုင်သည်။ ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်း။
ငါ iPnone 1 ရှိ 6Password အိုင်ကွန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၎င်းကိုလုံးဝပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအသစ်သောငါ့ကိုကဲ့သို့ထင်ရှား။ ,
Yonle du reset settings နဲ့ကျွန်တော် icon တွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ဘာသာစကားရွေးဖို့သာလိုပါတယ်
ငါသည်ငါ့ iphon3ရှိ whatsapp အိုင်ကွန်ကိုဖျက်လိုက်ပြီး၎င်းကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်ကိုမသိပါ၊ လက်တစ်လုံးပေးပါ။ ၎င်းကိရိယာသည်နောက်ဆုံးအော်ဟစ်ခြင်းမခံရဘဲအလုပ်မလုပ်သေးပါ။
Jorge Leon ဟုသူကပြောသည်
iPhone6Plus ၏စာသင်္ကေတကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်နည်း
Jorge Leon သို့စာပြန်ပါ
ငါသည်လည်းစာပို့သင်္ကေတကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ၊ ၎င်းကို siri မှတဆင့်ရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်၏အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်၊ မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိဂီတဒေါင်းလုပ်အိုင်ကွန်ကိုမှားယွင်းစွာဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်အိုင်ကွန်များကိုပြန်ယူပြီး၎င်းထွက်မလာပါ။ မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Reyna Divva ဟုသူကပြောသည်
Reyna Divva သို့ပြန်သွားပါ
Call of Duty Mobile beta ကိုလာမည့်သီတင်းပတ်တွင်စတင်မည်
Spotify ကကားအတွက်ကားပစ္စည်း "Car Thing" ကိုပြသသည်။